जky्कयार्ड - बच्चा उपेक्षाको बारेमा किन यो अर्थपूर्ण कथा एक हेर्नु पर्छ - पालना दृश्य
कबाड - बच्चा उपेक्षाको बारेमा किन यो सार्थक कथा एक हेर्नु पर्छ
सामान्य समीक्षा के यो लायक हेरिरहेको छ?
by Dima 30th अप्रिल 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड जन्कायार्डमा - बाल उपेक्षाको बारेमा किन यो अर्थपूर्ण कथा एक अवलोकन हो
कम्तिवाट कम्तीमा भन्नु अन्धकार छ, तर यो फिल्मको भरमा यो सोबर र निराशाजनक टोन मात्र होइन जुन यो अवलोकनलाई परिभाषित गर्दछ, अन्तमा यो अन्त्य पनि हो जसले पूर्ण रूपमा फरक थिम उत्पादन गर्दछ। जुनकियर्डको कथाले दुई साथीहरू जो पावल र एन्थोनी भनिन्छ जो साथी बन्छन्। हामी कसरी उनीहरू साथी बन्छौं भनेर देख्दैनौं र हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि उनीहरू हालसालै मित्रहरू भए। तिनीहरू थोरै फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् र यो सम्पूर्ण फिल्ममा देखाइएको छ।
चलचित्र पुरुष र एक महिला सबवेमा हिंड्दैबाट सुरू हुन्छ। यो स्पष्ट छ कि तिनीहरू एक रात बाहिर आएका छन् र आफैले रमाएका छन्। ती सबवेमा बिभिन्न व्यक्तिहरू हुन् जसलाई पश्चिमी समाजमा हामी अवांछनीय, लागूपदार्थको प्रयोग गर्ने, ड्रक्सी र भिखारीलाई मान्दछौं। यो स्पष्ट छ कि पुरुष र महिला यी व्यक्तिहरूलाई तल भुइँमा हिंड्दा तल हेर्दछन्। एक मान्छे पनि माथि आउँछ र मानिसलाई परिवर्तनको लागि सोध्छ तर ऊ कठोरतापूर्वक उसलाई पठाउँदछ।
तिनीहरू सबवेमा हुँदा एउटा पुरुषले महिलाको पर्स चुराउँछ र पावल (त्यस मान्छे) उनको पछि लाग्छन्, जब सम्म उनीहरू गाडीको बिचमा भइरहेको अन्तक्रियामा पुग्न नसक्दासम्म पीछा जारी रहन्छ।
त्यो मान्छे छुराले हिर्काइन्छ र हामीलाई फ्ल्यासब्याक दृश्यमा लगिन्छ जहाँ हामी व्यक्तिलाई बच्चाको रूपमा देख्छौं। अर्को बच्चाको साथ। हामी पावल र एन्थोनीलाई पहिले देख्छौं जब उनीहरू भत्काइएको कारहरूले भरिएका जंक यार्डमा प्रवेश गर्छन्। तिनीहरू यस दृश्यमा केवल १२ को बारेमा छन् र केटाहरूले पार्कमा दगुर्दै खुशीसाथ पहिले नै क्षतिग्रस्त सवारीहरू चोर्दैछन्।
हामी देख्छौं कि पावल र एन्थोनी कति लापरवाह र निर्दोष छन् यस दृश्यमा उनीहरूका कार्यहरू मार्फत र यसले संसारमा उनीहरूको दृष्टिकोण त्यो उमेरका धेरैजसो युवाहरू जस्तै छन् भनेर देखाउँदछ। पहिले नै थकित कारहरूका केही प्रहार गर्दा दुई केटाहरू एउटा पुरानो कारवाँ तर्फ आउँछन्, पहिले असन्तुष्ट देखिन्छन्। एन्थोनीले विन्डो चकनाचुर पारेर केटाहरू हाँस्न तर काफ्रेनबाट चिच्याईन्छ, यो मानिस हो। ऊ केटाबाट भागेपछि ऊ केटाहरूलाई प्रहार गर्दछ।
हामीले एन्थोनी र पल्ट देखेको केही समयपछि एन्टनीको घर देखिन्छ। ऊ ढोकाको घण्टी बजाउँछ र शीशाको दुखाइमा तुरुन्तै एक चित्र देखा पर्दछ, यो एन्थोनीको आमा हो। उनले झ्याल खोलिन् र एन्थोनीलाई एउटा नोट दिइन्, आफैंलाई केही खाना लिन भन्दै।
यस पछि तिनीहरू खाना किन्नको लागि खाद्यान्न स्टालमा देखिन्छन्। त्यसपछि पावलको आमाले उसलाई बोलाउँछिन् र उनी भित्र आफ्नो घरतिर लाग्छन्। त्यसपछि पानी पर्न थाल्छ र हामी अनोथीलाई बाहिर पछाडि ढोका ढकढक्याइरहेका देख्छौं। हामी पावलको दृष्टिकोणबाट हेर्दछौं कि उसको राम्रो घर र हेरचाह गर्ने आमा छ। तिनीहरू दुबै एनाथी पीटि by्गले अवरुद्ध हुन्छन् र पावलको आमाचाहिँ एनोथीलाई वर्षा र भित्रबाट बाहिर लैजान बाहिर जान्छन्।
केटाहरू बीच भिन्नता
त्यसोभए हामी यो पहिलो दृश्यबाट देख्न सक्छौं कि दुई केटाहरू फरक छन्, अझै मित्र र फरक छन्। पावलको राम्री आमा छिन जसले उनको ख्याल राख्छिन् र अरुको लागि पनि खोज्दछन्, एन्थोनी, जसको जीवन थोरै भाग्यशाली छ जस्तो देखिन्छ। यो अन्तिम पटक हो जब हामीले एन्थोनी र पललाई बच्चाको रूपमा देख्यौं तर यसले हामीलाई धेरै कुरा बताउँछ।
एन्थोनी र पावलबीचको भिन्नता
मैले यस फिल्मको बारेमा केहि भन्न चाहान्छु र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यसको पहिलो आधा तथ्य यो छ कि त्यहाँ त्यति थोरै संवाद छ, पछिल्लो दृश्यहरूमा पनि। यो फिल्म १ 18 मिनेट मात्र लामो छ, फिल्म एक अविश्वसनीय छोटो अवधिमा यसलाई तान्न व्यवस्थित गर्दछ।
चलचित्रको यस प्रारम्भिक पहिलो आधा भागमा हामी स्थापना गर्छौं कि पावल र एन्थोनी मित्र छन्, तिनीहरू केहि समयका लागि थिए। यो प्रमाणित हुन्छ जब हामी एक फोटोको छोटो झलक देख्छौं जब पावल र एनोथनीलाई साना बच्चाहरुको रूपमा देखाउँछन्। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले मुख्य रूपमा दुई केटाहरू र उनीहरूको सम्बन्धको हाम्रो प्रारम्भिक प्रभावहरू सेट गर्दछ। यसले हामीलाई धेरै कुराकानीमा निर्भर नगरी धेरै कुरा पनि बताउँछ।
दुई केटाहरू एक समान छन् के के मा साझा को लागी, जो धेरै धेरै छ। तर अन्तत: तिनीहरूको फरक पृष्ठभूमि र पालनपोषण हुन्छ। फिल्मले यस कुरालाई हामीले फिल्मको पहिलो घटनाहरूमा देखेको कुराकानी संवाद मार्फत होइन तर स्क्रिनमा देखाउँदा देखाउँदछ।
यो त्यस्तो चीज हो जुन मलाई साँच्चिकै मनपर्‍यो र यसले मलाई फिल्मको आनन्द लिने बनाउँदछ। यति थोरै संवादको साथ यति चित्रण गर्न सक्षम हुनु भनेको के हो कि मैले टिभीमा खासै केही देखेको छैन, चलचित्रमा एक्लै छोड्नुहोस् जहाँ तपाईंसँग तपाईंको दर्शकहरूलाई कथा वर्णन गर्न थोरै समय हुन्छ, जुनकियार्डले त्यो गर्न सक्षम हुन्छ धेरै विश्वस्त र अद्वितीय तरीका।
कथा पछि हामी देख्छौं कि पावल र एन्थोनी थोरै भए र अब किशोर-किशोरीहरू भए। मलाई लाग्छ तिनीहरू यसमा १ 16-१-17 को बारेमा हुनु पर्छ र यो उनीहरूको लुगा र एक अर्कासँग कुरा गर्ने तरीकाको कारणले हो। तिनीहरूको मोटरसाइकलमा सवारी लिँदा यो टुट्छ। यो केवल कुनै पनि पुरानो सडकमा टुक्रिदैन जुन यो कky्कयार्डको छेउमा भएको थियो जुन उनीहरूले भ्रमण गरेका थिए वा उनीहरू बच्चाहरू हुँदा भेट्न प्रयोग गर्थे।
तिनीहरू बाइकको निरीक्षण गर्दैछन् जब समान उमेरको केटा तर अलि उमेरको केटा आउँछन् उनीहरूको निकास पाइप समातेर समस्या आउँछ कि भन्दै ऊ यार्डमा नयाँ छ। जब उनले केटाका केटाहरू तर्फ हिड्दैछन् भनेर थाहा पाउँदा पावल हिचकिचाए र उनिहरु केटा थिए जब उनीहरूले भाटे। यो पनि पुष्टि भयो कि "डन्कन" नाम गरेको पहिलो दृश्यमा मान्छे पछाडि उभिरहेको बच्चा पनि त्यो छोरोको छोरो हो।
डन्कनले एन्थोनी र पॉललाई कारवांतिर डो leads्याउँछन्
यस दृश्यको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने ती दुवै हुन् पावल र एन्थोनीको प्रतिक्रिया र उनीहरूले फरक व्यक्ति र घटनाहरू महसुस गर्ने तरिका। एन्थोनी सहमत देखिन्छन् र कुनै पूर्व-विचार बिना नै आँखा चिम्लेर हिँड्दछन्। पावल फरक छन्। ऊ आफ्नो वरपरका बारे हिचकिचाउँछ र कहाँ र कससँग कुराकानी गर्न मिल्दैन। एन्थोनी ठूलो केटो डन्कनमा चासो राख्छन् र प्रायः उसको वरिपरि हेरे, उनी पछाडि कुनै कुरा नबुझीकन, उनले जे भने पनि कुनै हिचकिचाहट बिना भने जब पावल जहिले पनि अलि संकोच र सतर्क थिए।
एन्थोनीले बाइकको भाग पुनः प्राप्त गरेपछि, पावल र डन्कन त्यसपछि सम्भवतः डन्कनका बुबाले दिने ड्रग्स लिएर जान्छन्। तिनीहरू एक ड्रग डेनमा जान्छन् जहाँ हामी फेरि अरूलाई सोच्न नसक्ने भित्र जान्छौं जबकि पावल हेडिंग अगाडि बाहिर थोरै पर्खन्छन्। केटाहरूको पृष्ठभूमिको महत्त्व केहि हो जुन म पछि जान्छु तर संक्षेपमा हामी देख्न सक्छौं कि प्रत्येक boys केटाको फरक फरक पालना गरिएको छ र यो हामी पछि महत्त्वपूर्ण हुनेछौं।
ड्रग हाउस दृश्य
डंकनले पावल र एन्थोनीसँग एक ड्रग हाउसमा ड्रग्सहरू पुर्‍याउँछन्
जब उनी बेहोस मानिसको खुट्टामा टुक्रिदिए पुग्दा उसको अनुहारमा ब्यूँझिन्छ र ऊ चिच्याउँथ्यो। यस कारण ऊ एन्थोनी र डन्कनको पछि लाग्यो र घर हिंड्न बाध्य भयो। यहीं उनले “सल्ली” एउटी केटीलाई भेटे जो एन्थोनी र पावल किशोरावस्थामा देखिन्छ जब उनीहरू ठूला भएपछि देखा पर्छन्। यो सेली र पॉल चुम्बन को दृश्य मा कटौती गर्दछ र एन्थोनी द्वारा उनीहरु अवरुद्ध छन्।
एन्थोनी बाहिर हुँदा पावल र साली चुम्बन गर्दै
सैलीले एन्थोनीलाई टाढा जान भन्यो र एन्थोनी कच्च्याardको लागि हिंड्न थाल्छ जहाँ उनले बुबाले डन्कनले दुर्व्यवहार गरेको देखे। एन्थोनीले डन्कनलाई माथि मद्दत गर्दछ र दुईजना सँगै हिँड्न। यो दृश्य एकदम राम्रो छ किनकि यसले डन्कनको लागि एन्थोनीको अनुकम्पा देखाउँदछ, यद्यपि उनीहरूले एक अर्कासँग कडासँग कुरा गरे पनि।
उनी दुर्व्यवहार भएपछि एन्थोनीले डन्कनलाई मद्दत गर्छन्
यसले पनि देखाउँदछ कि एन्थोनीले डन्कनलाई केही सहानुभूति देखाउन सक्छ किनकि उसलाई थाहा छ कि यो आफ्ना बाबुआमाले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। यसले उनीहरूलाई सामान्य जमिनमा रहन दिन्छ र यसले दुबै बीच अझ बढी ठोस सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। पछि हामी देख्दछौं पावल साली पछाडि उसको फ्ल्याटमा गइरहेका थिए। उसले ढोकाबाट दुई जोडी ढोका ढकढकाएको खुट्टाको एक जोडीलाई याद गर्दछ। उसको अचम्ममा उसले एन्थोनी र डन्कन हेरोइन धूम्रपान गरिरहेको देख्यो।
एन्थोनी र डंकन हेरोइनको प्रयोग गरेको कुरा पावल याद गर्दछ ↑
हामी देख्छौं कि एन्थोनी पावलको लागि यति पागल भए र उनीहरूले दुन्खनलाई बिगार्नु पर्थ्यो। यो रमाईलो पनि छ कि यस दृश्यमा यो डन्कन जो तर्कको आवाज हो। यसपछि ती तीन टाउको फर्काइ ज Jun्क्यायार्डमा फर्कियो, जुनकयार्ड मात्र होइन डराएको कारवाँ जसलाई हामीले दोस्रो दृश्यमा फेरि देख्यौं। पावल ढोकाबाट पर्खन्छन् र डन्कन द्वारा पनी "बिल्ली" भनेर चिनिन पाउँदैनन् पछ्याउँदैनन्।
अन्तिम दृश्य आउँछ जब boys केटाहरू एन्थोनीको आमाको फ्ल्याटमा मेरो लागी फिर्ता जान्छन्, यद्यपि उनी अहिले उपस्थित छैनन्। हामी वास्तवमा एन्थोनी आमालाई कहिल्यै देख्दैनौं, हामी यो पनि जान्दैनौं कि फिल्मको सुरूमा आइमाई आफ्नो वास्तविक आमा हो कि भनेर, हामी सोच्छौं र यो उनको इशारा मार्फत अस्पष्ट छ कि उसले खाना किन्न पैसा दिए पछि। केटाहरूले धूम्रपान गर्न थाल्छन् र एन्थोनीले पावललाई केही दिन्छन् ताकि उनी आराम गर्न सकून्। यो जहाँबाट हामी यो दृश्य पाउँछौं।
एन्थोनी डंकनसँगै धूम्रपान गर्ने पावल
केही कारणहरूले गर्दा पावल भ्रममा पार्न थाल्छन् र यो हो, म उनलाई उसको अवचेतन हुन सक्छ भनेर बताउँदैछु त्यहाँ खतरा छ। ऊ उफ्रन्छ र बाहिर दगुर्छ कि देखी सम्पूर्ण जky्कयार्डमा आगो छ। अन्तिम दृश्य अगाडि अन्तिम दृश्यमा हामी देख्छौं कि पुलिसले पुलिसलाई केहि भनिरहेका थिए। यो स्पष्ट हो कि यो के हो र हामीलाई एन्टनीले पुलिसले लगेर लगेको पनि पछि के हुन्छ भनेर हामीलाई व्याख्याको आवश्यक पर्दैन।
जुनकियार्डले आगो लगायो
त्यसोभए तपाईसंग यो एउटा महान कथा छ, यति राम्ररी भनिएको छ। मलाई प्यासी mention्ग उल्लेख नगरी कथा कसरी भनियो भनेर मन पर्यो। तथ्य यो छ कि त्यहाँ त्यति थोरै संवाद भए पनि हामी दर्शकहरूले यी १ characters मिनेटबाट यि पात्रहरू देख्न यति धेरै बुझ्दछौं।
डन्कले भाग्यो जबकि एन्थोनी सम्भवतः पक्राउ परेको थियो
कथाले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने कुरा के हो?
मलाई लाग्छ कि वास्तवमा ती तीन केटाहरूले stages चरणहरू वा बच्चाहरूको कोटिहरू प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने हुन्छ र यदि केटाकेटीहरू बेवास्ता गरियो भने के हुन्छ।
पावलले राम्रो बच्चाको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने हुन्छ। हामी यो चित्रण गरिएको तरिकामा देख्छौं। कुन सानो कुराकानीबाट हामी बुझ्छौं कि उहाँ विनम्र, दयालु र नैतिक तवरमा राम्रो बच्चा हुनुहुन्छ। उसको राम्रो व्यवहार छ र हामी देख्न सक्छौं कि उसको राम्रो हेरविचार हुर्काएको आमा, उहाँकी देखभाल गर्ने आमासँग। एन्थोनीसँग कुराकानी नगर्न पावलसँग कुनै कारण छैन र त्यसैले उनीहरू साथीहरू छन्। उहाँ सबैको आदर गर्नका निम्ति हुनुभएको छ तिनीहरू जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् वा उनीहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् र यसै कारण ऊ एन्थोनीको साथी हो।
त्यसोभए हामीसँग एन्थोनी छ। जसरी पावल पनि एक आमाको साथ हुर्केका छन् तर उनी बेवास्ता गरिएको छ। हामी यो देख्छौं कि त उहाँ बन्द छ, वा उसको आमाले ढोकामा आउन असमर्थ छ जब ऊ त्यसमा घण्टी बजिरहेको छ। यसले देखाउँदछ कि एन्थोनीकी आमा पल भन्दा फरक छन्। उनी गैरजिम्मेवारपूर्ण, उपेक्षित र वास्तवमा एन्थोनीको बारेमा कुनै चिन्ता देखाउँदिन जस्तो देखिन्छ, उसलाई खाना किन्न मात्र पैसा दिईन्छ जब ऊ आफ्नै घरको ढोकामा घुम्न जान्छ, भित्र छिर्न दिनुहोस्। म वास्तवमै एक व्यावहारिक कारण पाउन सकेन। किन मैले एन्थोनीको आमा एक लागुपदार्थको प्रयोगकर्ता हो भन्ने सोचे, यद्यपि यो भारी निहित छ।
अन्त्यमा हामीसँग डन्कन छ, जो फिल्मको शुरुमा पहिलो पटक एन्थोनी र पलले कारवांलाई भत्काउँदा हामी देख्छौं। डन्कन अर्को छेउमा छ र पावलको विपरित छ। उनीसँग डेनेटको लालनपालन छैन र एक ड्रग बिक्रेता र प्रयोगकर्ता द्वारा हुर्काइएको छ। हामी फिल्ममा देख्छौं र यो अत्यन्तै सुझाव दियो कि डन्कनलाई उनको बुबाले नियमित कुटे। कतै पनि जाने छैन उसको एक मात्र विकल्प रहनु हो। मेरो धारणामा डन्कनले सबैभन्दा नराम्रो वातावरण पाएका छन र हामी यो फिल्मबाट देख्न सक्छौं। ऊ रुखो, बेवास्ता गरिएको छ र आफूलाई अनादरपूर्ण तरिकाले बोक्छ।
एक तरीकामा तीन केटाहरू levels स्तर वा चरणमा छन् जब मैले यो राख्छु। पावल त्यहीं छन् जहाँ तपाईं आफ्नो बच्चा भएको चाहनुहुन्छ, एन्थोनी बिस्तारै अपराधमा फस्दै छ र डन्कन पहिले नै तल छ। त्यहाँ दुई चीजहरू छन् जुन ती सबैमा समान छन्। उनीहरूलाई हुर्काएको तरिका उनीहरूको कार्य र परिस्थितिसँग जोडिएको छ, र जुनकिअर्ड प्रकारले ती सबैलाई एकसाथ जोड्दछ।
पालनपोषण र पृष्ठभूमि को महत्व
बच्चाको रूपमा एन्थोनी र पल
अन्तिम दृश्यको अन्तिम क्षणहरूमा वास्तविक पात्रहरूले के सोचिरहेका थिए भनेर बताउन गाह्रो छ। मलाई लाग्छ कि यो सुरक्षित छ कि एन्थोनिस र पावलको अनुहारको अभिव्यक्तिबाट कि ती दुबै स्तब्ध थिए, म एन्टनीलाई पावल भन्दा बढी सोच्छु। एन्थोनीले अन्तिम टकरावलाई विश्वासघातको रूपमा देख्दछ। पावल अनिवार्य रूपमा आफ्नो साथीलाई बताउँछ र ऊ लगियो। जky्कार्डमा भएको मृत्यु र त्यसपछिको आगोको बारेमा पावल चिन्तित थिए। जे भए पनि यो दुई छोराहरूको सम्बन्धको लागि अन्तिम अन्तिम हो र मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै फिट छ। उनीहरू जान्दछन् कि उनीहरू के गरिरहेका छन् भनेर पावल जान्दथे र यसैले उनी डन्कन र एन्थोनीको बारेमा स्पष्ट थिए (धेरै जसो)। एन्थोनीले डcan्कनलाई पछ्याएको जस्तो देखिन्छ जुन उसले गर्छ र डन्कन, हामीलाई थाहा छ उसको मनसाय र समस्या के हो।
मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको बुँदा उनीहरूको पालनपोषण हो, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा तिनीहरू कसरी महत्त्वपूर्ण छन्। पावल राम्रो स्थितिमा छँदा एन्थोनी मात्र स्लिप सुरु गर्दैछ। एन्थोनीले अन्धाको आँखाले डन्कनको चारैतिर पछ्याएको कारण यो छ कि उहाँसँग हेरचाह गर्ने आमा हुनुहुन्न र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यस संसारमा के सही र के गलत छ भन्ने बारे उदाहरण बसाल्नुभएको छ र जसलाई तपाईंले आफ्नो साथीको रूपमा समावेश गर्नुपर्दछ र भरोसा गर्नुहुन्छ। तपाईं को देखि दूर टाढा रहनु पर्छ। मलाई लाग्छ कि जुनकियार्डले यी नैतिकताहरू सिकाउने कोशिस गर्दछ र यसले पक्कै पनि मलाई मेरो पालनपोषणको बारेमा सोच्न लगाउँदछ। केही मानिसहरूलाई अरूले जस्तो अवसर दिईंदैन, कोही उठाइन्छ वा उपेक्षित हुन्छ र मलाई लाग्छ कि यो जुनकियर्डले देखाउँदछ।
अन्त्य केही त्यस्तो चीज हो जुन मैले तत्काल थाहा पाएँ किनभने मलाई थाहा थियो कि आक्रमणकारी कसको जस्तो हुनु पर्छ। सबै फ्ल्यासिंग इमेजरीको पछाडि हामी एन्थोनीको थकित अनुहार देख्न सक्छौं उहाँ चक्कुको लागि तल पुग्दा। के एन्थोनीलाई थाहा थियो कि उनी पावल हुन् जसलाई उनले भर्खरै छुरा प्रहार गरेका थिए? यदि यो सत्य हो भने यसले फिल्मलाई अन्य सम्भावनाहरूको पूरै लोडमा खोल्दछ र यसले अन्वेषणमा अन्त्य गर्दछ। अर्को कुरा थप्नु हो जुन यदि पावललाई वास्तवमा थाँहा थियो कि उसले उसलाई छुरा प्रहार गर्यो। के यो अन्तको चीज हो जुन पावल सोच्न लागेका थिए?
फिल्म समाप्त भए पछि कल्पनामा धेरै छोडिन्छ र यो यहाँ छैन कि हामी यो देख्छौं। उदाहरणका लागि मैले यस अघि फिल्ममा थोरै संवाद गरेको भन्दा पहिले नै उल्लेख गरेका थियौं र प्रायः सूचनाहरू हामीले पात्रहरूका बारेमा प्राप्त गर्दछौं जुन पूर्ण रूपमा भिजुअल हुन्छ। फिल्मले यस किसिमको कथाको यथार्थ वर्णन गर्न सक्षम छ भन्ने तथ्य धेरै सन्तोषजनक छ किनकि हामीले त्यसमा यत्तिको भरोसा गर्नुपर्दैन। एकै समयमा फिल्मले तत्वहरूलाई व्याख्याको लागि छोडिन्छ, दर्शकलाई तिनीहरूको आफ्नै सिद्धान्तको साथ आउँदछ।
यसको एउटा उदाहरण एन्थोनीको आमा हो। मैले यो मात्र महसुस गरें जब म दोस्रो पटक ज Jun्कयार्ड थिए र म आफैंलाई यो याद गर्दिनको विरूद्ध दोष दिँदिन। हामी उनलाई एन्थोनीको आमा देखिन केवल एक पटक उनको उपस्थिति मा जब उनी खाना किन्न पैसा दिन्छन्। त्यस पछि हामी उनलाई फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौं। म उनको कुरा देखाउँछु कि एन्थोनी र पल कलिलो बच्चा थिए जब कि उनी किशोरावस्थामा थिएनन्। त्यसोभए किन यो महत्त्वपूर्ण छ?
हामी चलचित्रको दोस्रो भागमा जब हामी देख्छौं कि पॉल र एन्थोनी किशोर छन् कि एन्थनीको आमा घर भित्र छैन जब उनीहरूले कारवाँले आगो पक्रे पछि। मैले यो अत्यन्तै डरलाग्दो फेला पारे जब उनीहरूले फ्ल्याटमा प्रवेश गरे र त्यहाँ गाह्रो केही पनि थिएन तर भुँइमा गद्दे मात्र थियो। उसलाई के भयो? यो केहि छैन जुन सुरुमा बाहिर खडा हुनेछ तर मैले यसलाई चाखलाग्दो फेला पारे। उनको एक पटकको उपस्थितिले दर्शकहरूलाई एन्थोनी र उसको जीवनको प्रारम्भिक दृश्य विभाजित गर्‍यो।
अन्त्य शानदार थियो। विशेषज्ञता संग एक महान संगीत पठाउन को साथ समय। तथ्य यो हो कि ती दुई केटाहरूले जky्कायार्डलाई एकपटक नहेर्नु भन्दा पहिले उनीहरू निर्दोष देखि भागे तर यो एकदम सही थियो र मलाई लाग्दैन कि यो कुनै राम्रो तरिकाले गर्न सक्थ्यो।
पढ्न को लागी धन्यवाद, कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्।
के तपाईले यस लेखलाई रमाइलो गर्नुभयो? साइट निर्माताहरू र लेखकहरूलाई समर्थन गर्नको लागि तपाईं केही सामानहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ cradleview.net
CVS रातो समुराई डिजाइन टी-शर्ट
पुरुषको क्लासिक हान्या दानव शर्ट
सीवीएस हन्न्या डेमन चैम्पियन टोपी [Col रंगहरू]
महिला सीवीएस हान्न्या छोटो आस्तीन टी शर्ट
CVS Gangsta गर्ल डिजाइन टी-शर्ट
सीवीएस साँझ दानव टी-शर्ट
म cradleview.net जस्ता साइटहरूको लागि लेखहरू लेख्छु तपाईले मलाई ईमेल गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ: inquiries@cradleview.net निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो सन्दर्भ "Dima" को रूपमा राख्नुभएको छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले छलफल र समीक्षा गर्ने सबै विषयहरूमा इमानदार र निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान गर्ने छु। म सामान्यतया कुनै फिल्टर बिना मेरो दिमाग बोल्ने प्रयास गर्छु र यो मेरो मनपर्ने तरिका हो। मलाई आशा छ कि तपाईले यो बुझ्नुहुनेछ र तपाईले मेरा लेखहरू पढ्दै गर्दा यसलाई ध्यानमा राख्नुहुनेछ। तपाईं मलाई इन्स्टाग्राममा पुग्न सक्नुहुन्छ: @cradleview म क्र्याडल भ्यू च्यानल प्रयोग गरेर YouTube मा पनि सक्रिय छु। मैले सकेसम्म त्यो च्यानलमा नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्न मद्दत गर्छु, त्यसैले यसलाई जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्, यदि तपाईंले सक्नुहुन्छ भने यसले मलाई र साइटलाई धेरै मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईं मलाई र साइटलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, सधैं यो साइट र मलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा व्यवस्थित Patreon पृष्ठ सेटअप नगरुन्जेल सबैभन्दा राम्रो विकल्प मार्फत दान गर्ने हो: cradleview.net/donations यदि तपाईंले यो साइटमा दान गर्नुभयो भने यसले मलाई धेरै मद्दत गर्नेछ। सबै साइट दानहरू तदनुसार र साइटसँग जोडिएको सबै कुरामा र क्र्याडल दृश्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उप-संस्थाहरूमा, औपचारिक रूपमा cradleview.net खर्च गरिनेछ।Dima द्वारा सबै पोष्टहरू हेर्नुहोस्
अघिल्लो प्रविष्टि शीर्ष १० एनिम शिमोनता जस्तै
अर्को प्रविष्टि इंस्टाग्राम स्टार जीन येबिन [전 예빈] इन्स्टाग्राम पोस्टमा नयाँ बिकिनी देखाउँदछ